ဘုရားရှေ့က ခြင်္သေ့ရုပ်က ဒီလိုပါ - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
ဘုရားရှေ့က ခြင်္သေ့ရုပ်က ဒီလိုပါ
Posted by ukkmaung on July 29, 2012 at 7:16am
စာရေးသူယခု တင်ပြသွားမည့်စာသားလေးက (ဘုရားရှေ့က ခြင်္သေ့ရုပ်က ဒီလိုပါ )ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကို
မှားသောအပိုင်း နှင့် မှန်သောအပိုင်း ဆိုပြီး
နှစ်ပိုင်းခွဲခြားရေးသားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအကြောင်းအရာကို ရေးသားရခြင်းအကြောင်းကား စာရေးသူ ဟင်္သာအကြောင်းကို ရေးသား၍ မျှဝေလိုက်သောအခါ စာပေချစ်ခင်သူများသည် ခြင်္သေ့အကြောင်းကိုလည်း သိချင်ပါသည် ဆက်လက်၍ ရေးသားပေးရန် တောင်းဆိုသူများ ရှိခဲ့သောကြောင့် ခြင်္သေ့အကြောင်းကို ရေးသားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချို့စာပေချစ်ခင်သူများသည် ဘုရားစေတီများရှေ့တွင် ခြင်္သေ့ပုံကို တွေ့မြင်ကြရသည့်အခါ ခြင်္သေ့အကြောင်းကို သိချင်သူများ
အလွန်တရာများလှသည်။ တချို့သိသူများရှိသလို မသိသူများလည်း အလွန်များလှသည်။ တချို့သိသူများကလည်း ဃဃနန သိသူရှိသလို လွဲမှားပြီး သိကြသူများလည်းရှိကြသည်။ သိပြီးသူများလည်း ပြန်လည်၍သိစေခြင်းငှါလည်းကောင်း၊ တိတိကျကျ မသိသေးသည့် သူများလည်း မှန်မှန်ကန်ကန် သိစေခြင်းငှာလည်းကောင်း လက်လှမ်းမှီသမျှ ရှာဖွေစုဆောင်း၍ရေးသားသွားပါမည်။
တချို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုသည် သီဟဗာဟု မင်းကို အကြောင်းပြုပြီး ဘုရားစေတီရှေ့များတွင် ခြင်္သေ့ရုပ်ပုံများ ထုလုပ်ထားသည်ဟု ရေးသားသူများရှိသလို သိရှိထားကြသူများလည်း ရှိကြပေသည်။ အထက်ပါ အထောက်ထား မှန်မမှန် ဝေဖန်သုံးသပ်ဘို့ များစွာလိုအပ်လှပေသည်။
သီဟဗာဟုမင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘုရာစေတီများရှေ့တွင် ခြင်္သေ့ရုပ်ပုံများထုလုပ်ထားသည်ဟုရေးသားထားသော
( မြတ်မင်္ဂလာ ၂၀၀၁-ခု ဇန်န၀ါရီလ ) ထုတ်တွင်လည်းကောင်း၊
မင်္ဂလာသတင်းစဉ် blog site (http://mawluu.blogspot.com/2009_09_01_archive.html) နှင့်
ဓမ္မရတနာ(Google groups) မှာလည်း ဖြန့်ဝေထားသည်ကို စာရေးသူရှာဖွေဖတ်မှတ်ထားပါသည်။
..............ဘုရားစေတီပုထိုးတို့တွင် တွေ့ရသော ခြင်္သေ့ရုပ်တု...........
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတို့သည် ဘာသာတရားကို လွန်စွာယုံကြည် ကိုးစားကာ ရိုသေကိုင်းရှိုင်းကြပေသည်။ မြန်မာပြည်တ၀န်း အရပ်ရပ်တွင် ဘုရားစေတီ ပုထိုးတို့ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ယင်းစေတီပုထိုးတို့၏ မုခ်ဦးတွင် ခြင်္သေ့ရုပ်တု နှစ်ခုကို တွေ့မြင်ရသည်မှာ အထင်အရှားပင်။ ထိုကဲ့သို့ စေတီပုထိုးတို့တွင် ခြင်္သေ့ရုပ်တုကို တွေ့မြင်ရခြင်း အကြောင်းရင်းမှာ အောက်ပါ ပုံဝတ္ထုအရတို့ ဖြစ်ပါသည်။
ရှေးအခါက ၀င်္ဂတိုင်းကို အစိုးရသော ၀င်္ဂရာဇ်မင်းသည် ကာလိင်္ဂမင်း၏ သမီးတော်ကို မိဖုရားတင်မြှောက်၏။ ထိုမိဖုရားမှ သမီးတော်တပါး ဖွားမြင်၏။ သမီးတော်လေး၏ ဇာတာ စန်းလဂ်တို့ကို နိမိတ်ဖတ်ပညာရှိများက တွက်ချက်ကြည့်ရာ ဤမင်းသမီးသည် ကေသရာဇာခြင်္သေ့မင်း၏ မြောက်သား ဖြစ်လိမ့်မည်-ဟု နိမိတ်ဖတ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် မင်းသမီးကို ကေသရီ-ဟု အမည်မှည့်ကြ၏။ ကေသရီသည် လွန်စွာလှပ ချောမောလှသော်လည်း ကာမဂုဏ်တို့၌ ခုံမင်မက်မောအားကြီး၏။ ခမည်းတော်၊ မယ်တော်တို့ ဆိုဆုံးမခြင်းကို နာခံခြင်း မရှိသောကြောင့် ပြည်မှ နှင်ထုတ်လိုက်၏။
မင်းသမီးလည်း ဆင်းရဲသူမ အသွင်ဖြင့် လှည်းကုန်သည်တို့နှင့် လိုက်သွားလေသည်။ လာဠတိုင်းဖြစ်သော တောအုပ်သို့ ရောက်သည့်အခါ ကျောက်ဂူ၌ နေသော ကေသရာဇာခြင်္သေ့မင်းသည် လှည်းအပေါင်းကို လိုက်လေသည်။ လှည်းသားများ ကြောက်ရွံ့၍ ထွက်ပြေးပုးန်းရှောင်ကြ၏။ မင်းသမီးမှာမူ နိမိတ်ဖတ်ပညာရှိတို့ စကားကို သိထားလေရာ ခြင်္သေ့မင်းရှိရာသို့ ပြေးသွားတော့၏။ ခြင်္သေ့မင်းလည်း မင်းသမီးကို မြင်တွေ့လေသော် တပ်မက်သောစိတ်ရှိသဖြင့် ခါးအမြီးတို့ကို လှုပ်လျက် နားနှစ်ဖက်ကို ချပြီးလျှင် စောင့်နေ၏။ မင်းသမီး၌ တပ်စွန်းခြင်းရှိသောကြောင့် မိမိကျောကုန်းထက်၌ တင်ပြီးလျှင် ကျောက်ဂူသို့ ခေါ်ဆောင်သွား၏။မင်းသမီးသည် ခြင်္သေ့မင်းဖြင့် သားတယောက်၊ သမီးတယောက် အမြွှာမွေးဖွား၏။ သားကို သီဟဗာဟု နှင့် သမီးကို သီဟသီဝလိ-ဟု အမည်မှည့်၏။ သားနှင့်သမီးတို့ တဆယ့်ခြောက်နှစ်အရွယ်သို့ ရောက်သော် မိခင်အား ၄င်းတို့သည် မိခင်နှင့်သာ အသွင်တူ၍ ဖခင်နှင့် မည်သို့သောကြောင့် အသွင်မတူသနည်းဟု မေး၏။ ထိုအခါ မိခင်က ယင်းသည် ခြင်္သေ့မင်းနှင့် ပေါင်းဖက်ရသည့်အကြောင်းကို ပြောပြလေသည်။ သားဖြစ်သူက မိခင်နှင့် နှမကိုခေါ်၍ မိမိအဘိုးရှိရာ ၀င်္ဂတိုင်းသို့ ထွက်ပြေး၏။ ၀င်္ဂတိုင်း၏ နယ်စွန်ဖြစ်သော ပစ္စန္တရာဇ်သို့ ရောက်လေရာ မင်းသမီးဦးရီးတော်၏ သားဖြစ်သူ အနုနမည်သော စစ်သူကြီးနှင့် တွေ့ဆုံကြလေသည်။ အနုနစစ်သူကြီးက အကျိုးအကြောင်းကို မေးမြန်းရာ ၀င်္ဂမင်း၏ သမီးတော်ဖြစ်ကြောင်း
သိသွားသဖြင့် ၀င်္ဂမြို့သို့ ခေါ်ဆောင်သွားကာ ပေါင်းသင်းနေလေသည်။ခြင်္သေ့မင်းလည်း အစာရှာရာမှ ပြန်လာသော် ဇနီးနှင့်သားသမီးတို့ကို မတွေ့သဖြင့် ပူပင်သောကရောက်ကာ လိုက်လံရှာဖွေရာ တိုင်းစွန်ပြည်နားသို့ပင် ရောက်ရှိခဲ့၏။ ခြင်္သေ့ဝင်သဖြင့် ရွာအများပျက်စီးကြရလေသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်သူအများက ၀င်္ဂမင်းကြီးအား ခြင်္သေ့ကို နှိမ်နင်းပေးပါရန်
လျှောက်ထားကြသည်။ မင်းကြီးလည်း ဆင်ကုန်းထက်တွင် ဆုငွေထောင်ထုပ်ကို တင်လျက် ခြင်္သေ့ရန် နှိမ်နင်းနိုင်သူကို ရှာဖွေစေ၏။ သီဟဗာဟု သတို့သားလည်း ဤခြင်္သေ့သည် ငါတို့ကို မတွေ့သမျှ ရှာဖွေမည်သာ။ သို့ဖြစ်၍ ဤခြင်္သေ့ကို သတ်မှ ငြိမ်းအေးမည်-ဟု မယ်တော်ကို တိုင်ပင်၏။ မယ်တော်က နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် တားမြစ်သည်။ သုံးကြိမ်မြောက်၌မူ မယ်တော်ကို မပန်ကြားဘဲ အသပြာထောင်ထုပ်ကို ယူပြီးလျှင် ဓား၊ လှံ၊ လေးမြားတို့ကိုယူ၍ ခြင်္သေ့ရှိရာ ကျောက်ဂူသို့ သွားလေ၏။ ခြင်္သေ့မင်းလည်း အဝေးမှ လာနေသောသားကို မြင်ရသော် ချစ်ခြင်းမေတ္တာစိတ်ဖြင့် စောင့်လင့်ကာ နေတော့သည်။ မင်းသားလည်း မြားရောက်နိုင်သည့် နေရာမှရပ်၍ မြားဖြင့်ပစ်လွှတ်၏။ သားအား ချစ်ခြင်းမေတ္တာအဟုန်ကြောင့် မြားသည်
ခြင်္သေ့မင်း၏ နဖူးကို ထိမှန်သော်လည်း စူရှခြင်းမရှိဘဲ ပြန်လည်၍ မင်းသား၏ခြေရင်း၌ ကျ၏။ ဤသို့ သုံးကြိမ်မြောက် ပစ်ပါသော်လည်း ရှေးနည်းတူပင် ပြန်လည်၍ မင်းသား၏ခြေရင်း၌ကျ၏။ ပစ်ဖန်များသော် ခြင်္သေ့မင်းလည်း အမျက်ထွက်လာသဖြင့် လိုက်၍ နှိပ်စက်ခြင်းငှါ ကိုယ်ကို လှုပ်ရှား၏။ ထိုအခါမှ ပစ်လွတ်သောမြားသည် နဖူးမှဝင်၍ ရင်သားကို ထွင်းဖောက်ကာ ကျောကုန်းမှ ထွက်ပြီးလျှင် မြေသို့ဝင်လေ၏။ ခြင်္သေ့မင်းလည်း သေဆုံးလေရာ မင်းသားသည် ခြင်္သေ့ဦးခေါင်းကို ဖြတ်၍ မင်းအား ဆက်သရန် ယူဆောင်လာခဲ့သည်။
၀င်္ဂမင်းကြီးသည် ခြင်္သေ့ရန်ကို နှိမ်နင်းရန် သီဟဗာဟုအား စေလွှတ်ပြီးနောက် ကိုယ်တွင်းရောဂါဖြင့် ကံတော်ကုန်လေသည်။ အလောင်းကို သင်္ဂြိုဟ်ပြီး ခုနစ်ရက်မြောက်နေ့တွင် မင်းသားပြန်ရောက်လာခဲ့၏။ သီဟဗာဟုသည် ၀င်္ဂမင်း၏ မြေးတော် အရင်းလည်း ဖြစ်သဖြင့်လည်းကောင်း၊ ခြင်္သေ့ရန်ကို နှိမ်နင်းအောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့်လည်းကောင်း၊ မှူးမတ်အပေါင်းတို့က ထီးနန်းကို အပ်နှင်းကြလေသည်။ သီဟဗာဟုလည်း မယ်တော်နှင့် ခင်ပွန်းအနုရက္ခ စစ်သူကြီးတို့အား ထီးနန်းကို အပ်နှင်းကာ မင်းပြုစေ၏။ မိမိမူကား နှမတော် သီဝလိကို မိဖုရားပြုကာ လိုက်လိုသူများကို ခေါ်ဆောင်လျက် မိမိအား မွေးဖွားရာ လာဠတောအုပ်ကို ရှင်းလင်းသုတ်သင်ပြီးလျှင် ခြင်္သေ့ဂူကို အဦးထား၍ မြို့တည်နေလေသည်။ ထိုမြို့ကို သီဟပုရမြို့-ဟု အမည်သမုတ်၏။
သီဟဗာဟုမင်းသည် မိမိ၏ဖခင်ဖြစ်သော ခြင်္သေ့မင်းကို သတ်မိသောအပြစ်ကို နောင်တတရား ရရှိကာ ဘုရားစေတီပုထိုးတို့တွင် ခြင်္သေ့ရုပ်တုကို တည်ထားကိုးကွယ်လေသည်။ ထိုအခါမှစ၍ ဘုရားစေတီပုထိုးတို့၏ မုခ်ဝတွင်လည်းကောင်း၊ ပစ္စယံ ၀န်းကျင်တွင်လည်းကောင်း၊ ခြင်္သေ့ရုပ်တုတို့ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ အသောကမင်းကြီး၏ စိုက်ထူသော ဆန်ချီနှင့်ဘာရု (Sanchi and Bharut) တွင်ရှိသည့် တိုင်ထိပ်၌ ခြင်္သေ့သုံးစီ၏ ရုပ်တုကို တွေ့မြင်ရပါသည်။
အထက်ပါ ပုံဝတ္ထုအရ စေတီပုထိုးတို့တွင် ခြင်္သေ့ရုပ်တုကို တွေ့ရသည်ဟု ယူဆမိပါသည်။
( တက္ကသိုလ်-ခေမာ။ ကျိုက်လတ် )
( မြတ်မင်္ဂလာ ၂၀၀၁-ခု ဇန်န၀ါရီလ )
အထက်ပါအထောက်အထားနှင့်ရေးသားထားသော အကြောင်းအရာများကို ရေးသားရာဝယ် ကျမ်းအမည်မပါပါ။
ထို့ကြောင့်စာရေးသူသည် ကျမ်းအမည်ကို ထပ်၍ ဖြည့်စွက်ထည့်ပေးလိုက်ပါသည်။ ကျမ်းအမည် ...မဟာဝင် စာအုပ်ကြီးဖြစ်ပါသည်။
မဟာဝင်စာအုပ်သည် အမှန်တော့ သီဟိုဠ်ရာဇ၀င် စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာပေကို ချစ်ခင်ကြသူ မိတ်ဆွေအားလုံးတို့ ဘာသာရေးမှာ အသိတိုးစေဘို့ မဟာဝင်စာအုပ်ကို ဖတ်စေချင်ပါသည်။
အထက်ပါဆောင်းပါး၏ ဆိုိုလိုချက်ကို အကျဉ်းချုပ်ပြရမယ်ဆိုရင်..
သီဟဗာဟုမင်းရဲ့ မိခင်ဟာ ခြသေ့င်္နဲ့ ပေါင်းသင်းပြီး သားဖြစ်သော သီဟဗာဟုနဲ့ သမီးဖြစ်သော သီဟသီဝလ တို့ကိုမွေးပါသည်။ မွေးဖွားလာသော သီဟဗာဟုဟာ အဖေဖြစ်တဲ့ ခြသေ့င်္ကို နောက်ဆုံးသတ်မိသောကြောင့်.သီဟဗာဟုမင်းလည်း မိမိ၏ဖခင်ဖြစ်သော ခြင်္သေ့မင်းကို သတ်မိသောအခါ နောင်တတရား ရပြီး ဘုရားစေတီပုထ်ိုးတို့တွင် ခြင်္သေ့ရုပ်တုကို တည်ထားကိုးကွယ်သည်.ဟု ဆိုလိုပါတယ်.
တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကိုသတ်မိလို့ နောင်တ ရ ကိုးကွယ်တာနဲ့ ဘုရားရှေ့မှာ ခြင်္သေ့ပုံကို ထားတာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်သောအခါ မသက်ဆိုင်ပဲ ကွာခြားနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာပေချစ်ခင်သူ ဗုဒ္ဓဘာဝင်တို့လည်း အလေးနက်ထား နှိုင်းယှဉ်ပါက ခြင်္သေ့ရုပ်ကို ဘုရားရှေ့မှာထားမှုနဲ့ မသက်ဆိုင်တာကို သိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
စာရေးသူ လေ့လာရှာဖွေပြီး အမှန်ကို တင်ပြရမည်ဆိုလျှင်........
ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပက်သက်တဲ့ သင်္ကေတများအကြောင်းကိုလေ့လာလိုက်သောအခါ ..အောက်ပါတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ဦးဇင်းတို့ ဂေါတမဘုရားရှင်သည် ၀ါဆိုလတွင်
တရားဦး ဓမ္မစကြာဟောကြားသောအခါ စကြာ .လှည်းဘီး သင်္ကတဖြင့်လည်းကောင်း အမှတ်သားပြုထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
ပွင့်( သစ္စာသိ) ခြင်း၊
စံ (ပရိနိဗ္ဗာပြု) ခြင်း နှင့် ဗျာဒိတ်ခံ ယူခြင်းတို့ကို စာပေတွင် လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
ဖွားမြင်သောအခါ ကြာသင်္ကေတနှင့် ရာသီခွင်ကို နွားသင်္ကေတတို့ဖြင့်လည်းကောင်း၊
ပွင့် ( သစ္စာသိ) သောအခါ ဗောဓိပင်နှင့် ခြင်္သေ့သင်္ကေတတို့ဖြင့်လည်းကောင်း၊
စံ (ပရိနိဗ္ဗာန်ပြု) သောအခါ နွားသင်္ကေတနှင့်ထူပါသင်္ကေတတို့ဖြင့်လည်းကောင်း၊
ဗျာဒိတ်ခံသောအခါ ကြာသင်္ကေတတို့ဖြင့်လည်းကောင်း စာပေမှာ လေ့လာမှတ်သားရပါသည်။
သင်္ကေတတို့၏ ဆိုလိုချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း မှတ်သားနိုင်ပါသေးသည်။
ကြာ ..... မြတ်စွာဘုရားအလောင်း မွေးဖွားစဉ်အခါက မွေးပြီးလျင်ပြီးချင်း နင်းလျောက်ခဲ့သောအရာ၏ သင်္ကေတ ဖြစ်ပါတယ်။
နွား ...... မြတ်စွာဘုရားအလောင်း မွေးဖွားစဉ်နဲ့ ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်သည့် လ၌ ရှိသော ရာသီခွင်၏ သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။
ဆင် ..... မယ်တော်မာယာဝမ်းကြာတိုက်သို့ ပဋိသန္ဓေယူခဲ့စဉ်က အမှတ်အသားဖြစ်သည့် သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။
မြင်း ...... မြတ်စွာဘုရားလောင်းတော် တောထွက်စဉ်က စီးခဲ့သော မြင်း၏ သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်.
(တနည်း) ကုသိုလ်တရားများပြုရာတွင် လျင်မြန်စွာပြုခြင်း၏ သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်..
စကြာ..... ဘုရားရှင် ဓမ္မစကြာဟောစဉ်က မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး၏ သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်..
ဗောဓိပင် ....... သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် အဖြစ်သို့ ရောက်ခဲ့သည့် နေရာ၏ သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်
ထူပါ ..... ဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်ကာ မီးသင်္ဂြိုလ်ပူဇော်ခြင်း၏ သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။..
ခြသေ့င်္ .... သစ္စာလေးပါးကို ရဲဝံ့စွာသိခြင်း၏ သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။..
(တနည်း)ဘုရားရှင်တို့မည်သည် အကျိုးကို မကျင့်ပါ..အကြောင်းကိုသာ ကျင့်ပါတယ်။..
ခြင်္သေ့၏ သဘောသဘာဝသည် ရဲ့ရင့်ခြင်း မကြောက်လန့်ခြင်းဖြစ်၏။ ခြသေ့င်္သည် သားကောင်ကို ဖမ်းသောအခါ ငယ်သည်ဖြစ်စေ ၊ ကြီးသည်ဖြစ်စေ အားအင်အပြည့်ဖြင့် ဖမ်းလေ့ဖမ်းထရှိသည်။ အားအင်အကုန်ထုတ်သုံးခြင်းဆိုတဲ့ အကြောင်းတရားကြောင့် မည်သည့်သတ္တ၀ါမျှ မလွတ်တော့ဘဲ အသေသတ်ပုတ်နိုင်မည်။ ခြင်္သေ့သည် တစ်စုံတစ်ဦးက သူ့အား မည်သည့်လက်နက်ဖြင့် ပစ်ခတ်ပြီး ရန်မူသော်လည်း လက်နက်ကို အရေးမစိုက် အကြောင်းဖြစ်သော ရန်သူကိုသာ ရဲဝံ့စွာ နောက်မဆုတ်ပဲ ခုခံတိုက်ခိုက်ပြီး အနိုင်ယူလေ့ရှိပါသည်။ ခြင်္သေ့သည် အကြောင်းတရားကိုသာ လိုက်ပြီး အပြတ်ရှင်းသည်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ကိုဆောင်ပါသည်။
ထိုနည်းတူစွာ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်လည်း သစ္စာလေးပါးကို သိရာဝယ် ပြိုင်ဘက်မရှိ ရဲရင့်လှပေသည်။ အမှန်ဖြစ်သော ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားကို သိသည့်အတိုင်း ရဲရဲ ၀ံ့ဝံ့ ချပြသင်ပြပေးသည်။ထို့ကြောင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော်သည်အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ ဒုက္ခသစ္စာတွေ ဖြစ်မလာအောင် ချုပ်ငြိမ်းအောင် ပစ္စုပ္ပန် မှာရှိတဲ့ အကြောင်းတရားတွေ ဖြစ်တဲ့ တဏှာ ၊ ဥပါဒါန် ၊ ကမ္မဘ၀ တို့ ဖြစ်ပေါ်မလာအောင် မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်တိုင် ကျင့်သုံးပြီး သူတစ်ပါးကိုလည်း ကျင့်သုံးစေလျက် အကြောင်းတရားကိုသာ ပယ်ခွာသည်။
အကြောင်းတရားများ ဖြစ်ပေါ်မလာပါက အကျိုးတရား ခန္ဓာ (ဒုက္ခသစ္စာ) သည် နောက်ထပ်ဖြစ်မလာနိုင်တော့ချေ ။ အကျိုးတရားတို့သည် ပုံမှန်အတိုင်း ဖြစ်နေသောကြောင့် အကျိုးတရားတို့ကို မဖြစ်အောင် လုပ်ယူ၍ မရစကောင်းပါ။
လူသားများသည် ခန္ဓာ ဟူသော (ဒုက္ခသစ္စာ) အကြောင်းတရားများ မရှိပါက ဝေဒနာ ဇရာ ၊ မရဏ ဟူသော အကျိုးတရားတို့ ဘယ်သောအခါမှ ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိချေ ။ ခန္ဓာ ဟူသော (ဒုက္ခသစ္စာ) အကြောင်းတရားရှိ၍သာ ဝေဒနာ ၊ ဇရာ၊ မရဏ တို့ ဖြစ်ပေါ်လာကြရသည်။
ထို့ကြောင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ပင်ကိုယ်သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော အကျိုးတရားကို သတ်ဖြတ်၍ မရသောကြောင့် အကျိုးတရားကို မကျင့်ပါ။
ခန္ဓာဟူသော ဒုက္ခသစ္စာ အကြောင်းတရားကိုသာ အဓိကအားဖြင့် သတ်ဖြတ်သောကြောင့် အကြောင်းတရားကိုသာ ကျင့်ပါသည်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ကိုဆောင်ပါသည်။
အထက်ပါ စကားနှစ်ရပ်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက ခြင်္သေ့သည် အကြောင်းကိုသာ လိုက်၍ အဓိကထား သုတ်သင်ပါသည်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်း အကြောင်းတရားကို အဓိကထားသတ်ဖြတ်ပယ်ခွင်းလေ့ရှိပါသည်။ ဤသို့အားဖြင့် ခြင်္သေ့နှင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်
အကြောင်းတရားတို့ကို အဓိကထားရှင်းလင်းသတ်ဖြတ် သုတ်သင်တာခြင်းတူကြသည်။
လောကလူသားတို့သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမတရားလိုချင်မှု လောဘ ၊ လိုချင်တာမရကြသည့်အခါ မုန်းတီးမှုဒေါသ စသော
အကြောင်းတရားတို့များစွာဖြစ်ကြသောကြောင့် သံသရာ ဘ၀ပင်လယ်ပြင်မှ အဆုံးမသတ်နိုင်ဘဲ ကျင်လည်နေကြရသည်။
အကယ်၍သာ လောဘစသော အကြောင်းတရားတို့ ဖြစ်ပေါ်မလာပါက ဆင်းရဲခြင်း ဒုက္ခဆိုတာလည်း ဖြစ်လာဘွယ်မရှိခြေ။
ထို့ကြောင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်လည်း သံသရာဝယ် ကျင်လည်နေကြရသော သတ္တ၀ါအားလုံးတို့အား အကြောင်းတရားတို့ကို
ပယ်သတ်ရန် လမ်းပြပေးသည်။ လောဘစသော တရားတို့လွှမ်းမိုးနေကြသော လူသားတို့အား ဤတရားတို့သည် သံသရာ ရှည်ကြောင်းဖြစ်၏။ သံသရာမှထွက်မြောက်ကြောင်း တရားတို့ကို ကျင့်သုံးနိုင်ပါမှ ဘ၀ငြိမ်းချမ်းမှုအစစ်ကို ရနိုင်မည်။
ထို့ကြောင့် လူသားအားလုံးတို့အား ဘ၀ငြိမ်းကြောင်းတရားတို့ကို ထာဝစဉ် အမှတ်ရစေခြင်း ၊ ကျင့်သုံးစေခြင်းငှါ ခြင်္သေ့ရုပ်တုကို ထုလုပ်ပြသထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လူသားအားလုံးတို့အား ဘုရားစေတီများရှေ့က ခြင်္သေ့ပုံကို မြင်ကြသည့်အခါ အော်.......ဘုရားရှေ့က ခြင်္သေ့ရုပ်က ဒီလိုပါလားဟု သိကြစေငှာ ဤဆောင်းပါးကို ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါသတည်း..........
၁။ မဟာဗုဒ္ဓ၀င် ရှစ်တွဲ
၃။ လည်တီဆရာတော်၏ ဘုရားရှိခိုး ခုနှစ်မျိုး
၄။ BUDDHiST SYMBOLS
၅။ ဓမ္မစေတီ ဟောထားသော နှလုံးသားဝယ် ဘုရားတည် အပိုင်း (၁)
၆။ ( မြတ်မင်္ဂလာ ၂၀၀၁-ခု ဇန်န၀ါရီလ ) ထုတ်တွင်လည်းကောင်း၊
၁နှင့်၂ သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များတွက် တကယ်သိမှ တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မှာမို့ တကယ်ဖတ်မှတ်ရမယ့်စာအုပ်များပါ။
၃.သည် ဂေါတမမြတ်စွာ ဘုရား ဘယ်နေ့ ဖွားပြီး ဘယ်နေ့မှာ တောထွက်တယ် စသည်သိအောင် နှုတ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာဝင်တိုင်း ရထားသင့်သည်။
၄ သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ သင်္ကေတများ အကြောင်းကို ရေးသားထားသော အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ဖြစ်သည်။
ယင်းစာအုပ်ကို အင်တာနက်ပေါ်တွင်လည်း ဖတ်လို့ အဆင်ပြေပါသည်။
ကျန်သော အညွှန်းများကို သိနိုင်လောက်ပါပြီ။။။
အရှင်သုဇနာစာရ (တက္ကသိုလ်စာသင်သား )